သက်ဝေ: အချစ်အကြောင်း ပြောရအောင်
rose of sharon March 22, 2011 at 6:30 PM
သြော်.... အချစ်အကြောင်းကို လွမ်းစရာလေးပြောသွားတာပေါ့... အမလိုတော့ မရေးတတ်ဘူး... ဒါပေမဲ့ ကြိုးစားရေးပါ့မယ်.... :)
ညီလင်းသစ် March 22, 2011 at 6:57 PM
အချစ်အကြောင်းက ပန်းချီကားချပ်လေးက အရောင်တွေစုံတယ်၊ စုတ်ချက်တွေ မြူးတယ်၊ နောက်ဆုံးမှာ အလွမ်းဆေးစက်လေးတွေ ဖိတ်ကျသွား တာတောင် perspective က ဖမ်းစားနိုင်လွန်းပါတယ်..။
rose March 22, 2011 at 7:04 PM
အခု ရေးတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးရော၊ အရင်က အစ်မသက်ဝေ ရေးခဲ့တဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်နဲ့ အချစ်ဆိုသည်မှာ ပို့စ်လေးတွေရော အကုန် ဖတ်သွားတယ်ရှင့်။ ရို့စ်က အစ်မသက်ဝေ ဖွင့်ဆိုတဲ့ အချစ်အကြောင်းကို ၀တ္ထု ပုံစံ မပာုတ်ဘဲ ရင်တွင်းဖြစ် ကိုယ်တွေ့လေးတွေ ထပ်ဖတ်ချင်တား)
Mon Petit Avatar March 22, 2011 at 7:07 PM
I love it, Ma Ma TW. I want to know about her side of the story too.
sonata-cantata March 22, 2011 at 7:18 PM
မကြီးမငယ်ကြီးကျမှ ငါ့ကို ငိုချင်အောင် လုပ်ပြန်ပြီ...
သက်ဝေရေ ကောင်းကောင်းလေး မန့်ချင်ပါတယ်
ညီမလေး March 22, 2011 at 8:54 PM
အချစ်ဟာတခါတလေ မထုတ်ပြပဲ အထဲမှာပဲ သိမ်းထားဖို့ကောင်းတဲ့အခါတွေ ရှိတယ် မမသက်ဝေ...ထုတ်ပြလိုက်ခါမှ အချစ်တွေ မသာမယာ ဖြစ်ကုန်တတ်လို့....
ShwunMi- March 22, 2011 at 10:14 PM
မကြီးသက်ဝေ လုပ်မှပဲ ရဲကျော်ကျော်ဦးကို သိပ်လွမ်းသွားတယ်.. သြော်.. အချစ်အကြောင်း ဆိုလို့လေ.. =)
မေငြိမ်း March 22, 2011 at 10:25 PM
မိုးငွေ့...... March 22, 2011 at 10:29 PM
ညီမလေးရေးမယ့် အချစ်အကြောင်းတော့ အဲလောက်ချစ်စရာကောင်းမယ်မထင်ဘူး..။
ဖြူ March 22, 2011 at 10:39 PM
သက်ဝေ ပြောပြတဲ့ အချစ်အကြောင်းလေးက သိပ်လှတယ်... ဒါပေမယ့် လွမ်းစရာ...
ထိုနေ့က ကျွန်တော့မှာ ပိုက်ဆံ တသိန်းပါခဲ့သည် ပြီးတော့ ဆီအပြည့် ဖြည့်ထားသော ဗင်ကားလေးလဲ ပါခဲ့သည်။ ထို့အတူ အချစ်၏ ဘယ်ဖက် လက်သကြွယ်မှာ လက်စွပ်လေး တခု ပါလာခဲ့သည် ဆိုတာလေးက ပိုစ့်တခုလုံးရဲ့ အသက်လိုပဲ...
pandora March 22, 2011 at 11:57 PM
ဒီအချစ်ကလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ပါ။
ဒါပေမယ့် မရိုးနိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းကိုပဲ ကြားချင်သေးတာ.. :)
Anonymous March 23, 2011 at 12:06 AM
Anonymous March 23, 2011 at 12:08 AM
Plz let me know the name of ur song “ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီးထဲ မင်းလက်ဆွဲခေါ် ပြေးသွား… အားလုံးထားခဲ့ပစ်လိုက်စမ်းပါ အချစ်လေး… ဝေးကြဖို့တော့ သတ္တိမရှိပါ… တို့မဝေးဘူး အတူတူဆို ပျော်မယ်သိတယ်… အားလုံးအဝေးပြေးချင်တယ်…"
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 23, 2011 at 1:16 AM
အစ်မ သက်ဝေလို နူးနူးညံ့ညံ့လေး မရေးတတ်တော့ခက်တယ်..
အချစ်အကြောင်းဆိုတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ဘာအကြောင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်..း)
ဒီတော့ ကျွန်မရဲ့ အချစ်အကြောင်းတော့ မနက်ဖန် မနက် ဖတ်လို့ရပါပြီလို့......
ဒီည အားတက်သရော မအိပ်စတမ်း ရေးနေပါတယ် လို့..း)
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်အစ်မ။ ငိုချင်လျက်မို့လားမသိ။ ဖတ်ရင်း ဘယ်လွမ်းရမှန်းမသိ.. လွမ်းစရာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် မချစ်တဲ့သူကို လက်ခံလိုက်တာကတော့ အချစ်သိပ်ညံ့တာပဲနော်။
Hmoo March 23, 2011 at 7:34 AM
အိမ့်ချမ်းမြေ့ March 23, 2011 at 8:47 AM
ပုံရိပ် March 23, 2011 at 10:09 AM
ဖတ်ရင်းနဲ့ လွမ်းတောင်လာတယ်။ အစ်မ သက်ဝေ အရေးကောင်းလို့။ ညက်နေတာပဲ။ ပုံရိပ်ကို tag ထားတာတွေ့တယ်။ အတော်ပဲ ရေးဖို့ အကြောင်း စဉ်းစားလို့ မရသေးတော့ အစ်မပေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲ စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်။
ဆုမြတ်မိုး March 23, 2011 at 11:18 AM
Turn-On-Ideas March 23, 2011 at 11:47 AM
အဲဒိသီချင်းပေါ်ခါစ လူပျိုပေါက်စနအရွယ်(၈တန်း၊၉တန်း)လောက်က နားထောင်ပြီး တအားကြိုက်ခဲ့တဲ့ သီချင်း၊ ဒီသီချင်းလေးပါမဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းက ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန်လေး သိပ်ကို အသက်ဝင်မှာဆိုပီး အခုလို ဆင်တူလေး ခံစားကြည့်ဖူးတယ်...
အစ်မသက်ဝေ သိပ်တော်လွန်း...း))
ရွှေပြည်သူ March 23, 2011 at 3:35 PM
ဖတ်ပြီးတော့ မျက်စိပျက် မျက်နှာပျက်နဲ့ ငိုင်ကျန်ခဲ့တယ် အစ်မသက်ဝေရယ်...
Anonymous March 23, 2011 at 11:39 PM
သြော်..အချစ်..အချစ်...ဟင်းးးးးး သင်းတော့လားကွာ...(လို့ပဲကြိမ်းမောင်းသာပြောချင်လိုက်တော့တယ် အစ်မရယ်...ဟီးးး)
မရဲ့ရင်တွငိးဖြစ် ကိုယ်တွေ့လေးနားထောင်ချင်တား)
အတင်းပြောတဲ့ကျောက် March 24, 2011 at 4:27 AM
ကျွန်တော့မှာ ကွမ်းယာ ဆယ်ထုပ် ပါခဲ့သည်၊ပြီးတော့လေအပြည့်ထိုးထားသော ဆိုက်ကားတစီးပါခဲ့သည်။....ထို့အတူ အချစ်၏ ဘယ်ဖက်လက်သူကြွယ်မှာလဲ ဆင်မြီးလက်စွပ်ပါခဲ့သည် (ကလေးမွေးလို့ လွယ်အောင်နေမှာ)
အ...ဟင်း..ဟင်း..ကိုယ်လဲ ဘဝသရုပ်ဖေါ် အချစ်အကြောင်းရေးကြည့်တာ..
အင်ကြင်းသန့် March 24, 2011 at 8:59 PM
ဖတ်ပြီးရင်ထဲမှာ လှိုက်ကျန်ခဲ့တယ်။ အရေးတော်လိုက်တာ မမသက်ဝေ... :))
အဲဒီသီချင်းကို အရမ်းကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ရအောင်ပြန်ရှာလိုက်ဦးမယ်။ :)
တန်ခူး March 24, 2011 at 10:18 PM
ချစ်တဲ့သက်ဝေရေ... စာမရေးတာကြာတဲ့သူတယောက်ကို စာရေးချင်စိတ်ပြန်ပေါ်လာအောင် အင်ဂျင်နှိုးတတ်လွန်းတဲ့ သူငယ်ချင်းကြောင့် အချစ်အကြောင်းပြောဖြစ်တော့မယ်... ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ရှပ်အကျီင်္လေးတွေအမြဲဝတ်တဲ့...ယောထမီလေးတွေဝတ်တဲ့... ဆံပင်အထူကြီးနဲ့ ချစ်သူကို မြင်ဖူးသလိုလိုပဲနော်... သိပ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူ၂ယောက် အဲဒီလိုဝေးသွားရတော့... ရင်ထဲမှာ ဆို့ နင့်ကြေကွဲစွာနဲ့ ပဲ ခံစားကြေကွဲနားထောင်သွားတယ် သက်ဝေ...
Assateague Island သှား တောလား - ၂ - ဘာဘီကြူးကငျနတေုနျး ဘေးနားကတဲကွိုမငျးတှေလာတယျ။ ပစ်စညျးတှေကို ဆှဲခနြလေို့မောငျးလိုကျတော့ ကိုယျတို့တဲဆီ ရောကျလာတယျ။ ထိုငျခုံပျေါက ပစ်စညျးတှေကိုဆှဲခလြို့အ...
မကုနျဆုံးခငျြသောညနေ...... - အငျးလြားကနျစောငျးရဲ့ နညေိုညိုညနခေငျးလေးတဈခုမှာ ကိုယျတို့နှဈယောကျ အတူမကျြနှာခငျြးဆိုငျထိုငျခဲ့ကွတယျ...။ တကယျဆို ကိုယျသူ့ကို ကောဖီဆိုငျတဈခုမှာ ကျောဖီ...
'သံယောဇဉ်' တရားတော်နဲ့ 'ထာဝရနှောင်ကြိုး' - တစ်ပတ်မှာ တနင်္ဂနွေတစ်ရက်ကတော့ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန် ဖြစ်တာကြောင့် အဲ့ဒီတစ်ရက်မှာ သာရေးနာရေး လူမှုရေးတွေကို အကွက်ချပြီး ကျွန်မတို့ လင်မယားနှစ်ယောက် လှုပ်ရ...
နိုင်ဇော်ရဲ့ မီးလျှံ (ပါဠိ version) - ကဗြာမှာလညျး အရောငျနဲ့ အဆငျးနဲ့။ ပနျးခြီမှာလညျး စာနဲ့ ပနေဲ့။ အစပျအဟပျတညျ့ခငျြရငျလညျး တညျ့မယျ။ တညျ့ခငျြမှလညျး တညျ့မယျ။ အလှသဈပနျးခြီပွခနျးမှာ ခငျးကငျြးတဲ့ နိ...
မီးခိုးတှနေဲ့ မွို့ - သူ့မွို့ကလေးက သနျ့ရှငျးသပျရပျ စညျးကမျးအထပျထပျနဲ့ပေါ့ အမှိုကျပဈတော့ ဒဏျငှရေိုကျတယျ စီးကရကျခှံလေးဟာ ဒျေါလာ၃၀၀ တနျတယျ မီးနီဖွတျမိတော့ ၁၂ မှတျနဲ့ ဒျေါလာ...
ဥာဏ်ပွင့် ချဉ်ဖတ် - ဒီနေ့တော့ ဥာဏ်ပွင့်လေးတွေ ရလာတာနဲ့ ချဉ်ဖတ်လေးလုပ်ပြီး ငါးပိရည်ဖျော် ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ထမင်းမြိန်မြိန် စားနိူင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ မြန်မာ...